Nametaka tombo-kase vaovao ve ianao? ...
Nametaka tombo-kase vaovao ve ianao? Indraindray ny tombo-kase vaovao dia mety hahatonga ny zavatra ho somary tery mandritra ny fotoana fohy. Mitovy amin'ny impeller vaovao. Omeo ora vitsivitsy handraisana anjara ary hahitana raha mihatsara ny raharaha.
Namaly ny Nametaka tombo-kase vaovao ve ianao? ... by ttravis
Manandrana mametraka ny gamp point sy ny fotoana amin'ny alàlan'ny fomba voltmeter aho.
Aiza no hametrahanao ny throttle hijerena ny ora ary hametrahana ny banga? Nahita ny sasany nilaza aho hoe malaina, ary ny sasany kosa milaza hoe WOT. Misy milaza fa tsy misy mahasamihafa azy, saingy tsy misy dikany amiko izany.
Inona no tsy hitako? Misaotra
Vao nanao jiro 3 hp aho tamin'ny voalohany ary natosik'ilay sorta aho mandra-pijeriko ary hitako fa na dia mihetsika mifandraika amin'ny cam aza ny takelaka, mijanona miaraka amin'ny cam ny teboka, ka tsy maninona izany. Raha ny zava-misy, raha manadino ny marikao ianao rehefa mametraka ny fotoana, raha manomboka amin'ny toerana "fanombohana" ianao, dia azonao atao ny mamindra ny hevitrao amin'ny cam na amin'ny lafiny roa. Na izany na tsy izany, nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha ilay toerana aho ary rehefa vita izany, ny motera azoko maimaim-poana dia nihazakazaka toy ny ambony ... 30 $ eo ho eo ny ampahany amin'ny fanarahana.
Ka, fehiny, tena tsy maninona izany, fa mety ho mora kokoa amin'ny toerana sasany noho ny hafa, mifototra amin'ny asa atao. Faly môtô!
Naveriko tamin'ny laoniny ny zava-drehetra, ny faritra ambany, ny gasket vaovao ao anaty carburetor ary ny plug vaovao. Mihazakazaka iray minitra fotsiny ary maty voalohany ary fanindroany vao manomboka maty fomba mety.
Tonga teo amin'ny sakana iray aho. Tsy mahita olona hampisaraka ny raharaha sy handoro ny varingarina ary hisolo piston sy peratra. Vonona ny hanandrana samirery aho raha afaka manadio ireo piston sy peratra.
Nisy olona nametraka hevitra fa mitady horonantsary youtube 4 amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny Johnson 5.5. Very ny fanehoan-kevitra tany am-boalohany satria nanidy an'ity tranonkala ity aho (indraindray mitranga) ary tsy maintsy mamerina amin'ny laoniny izay efa roa andro.
Misy mahalala ve ny kaodin'ny loko fandokoana ho an'ny môtô 1958 Johnson 5.5 hp CDL-15 motera? Ary raha eny, inona izany? Izaho dia eo afovoan'ny fanamboarana io môtô BEAUTIFUL io ary taorian'ny nidirako lalindalina kokoa tao amin'ilay motera dia nanapa-kevitra aho, "Inona ary? Mety handoko azy io koa izao." Izay fanampiana rehetra amin'ity lafiny ity dia hankasitrahana indrindra. Misaotra anao!
tsy azonao antoka ny kaody fandokoana, fa vao nividy loko etsy ambany rohy ary nanao redid tamin'ny 1955, dia nivadika ho tsara. ny bandy manana loko hafa koa.
napetraky guinea_man2000 tamin'ny Wed, 07 / 15 / 2020 - 00: 54
Lafo Vintage / Classic…
Vetivety mivezivezy amin'ny marika Vintage / Classic - Mamporisory ny lokony mifanentana JOHNSON OEM
amin'ny EBAY! novidiko ho ahy ireo loko ireo ary KOA nahazo ny sticker ihany avy amin'ny ebay, ny $ 50 dia ny decals.
Varahina volomparasy sy fotsy mafana. $ 20 dolara a
Nataoko ny fiovan'ny paompy solika tamin'ny 1955 5.5 HP Johnson Seahorse avy amin'ny tanky voatsindry mankany amin'ny tanky style siphon. Ny olana iray hitako dia ny tsipika banga amin'ny fidirana dia hofenoina lasantsy aorian'ny fihazakazahana 1/2 ora eo ho eo. izany dia hampijanona ny paompy ny paompy noho ny tsy fisian'ny polipitra poakaty avy ao anaty solika ao anaty tsipika. Nisy olon-kafa nanana an'io olana io ve, na efa nanamboatra an'io?
Misaotra betsaka noho ny fampahalalana momba ny loko loko tamin'ity "Seahorse" 1958 ity. Vao haingana kelikely izay no nafafiko ny palitao voalohany ary maina rehefa manoratra ity aho. Mahafinaritra ity tranonkala ity. Namadika ny tetik'asa fanarenana ahy ho lasa tetikasa "matihanina" betsaka kokoa ianao. Tsara izany! Manantena aho fa handefa sary atsy ho atsy rehefa vita. Misaotra anao indray.
napetraky Stikman amin'ny Mon, 06 / 08 / 2020 - 12: 18
Fanavaozana tankina solika
Ny raiko dia nividy 5.5 hp (5514) vaovao tamin'ny 1957. Amin'ny maha-tantsaha mpiasa iray azy taloha, dia mety nampiasa azy indray mandeha isaky ny fahavaratra izahay tamin'ny taona 60 sy 70 tany ho any. Nipetraka natory tao amin'ny fitoeram-bokatra izy hatramin'ny nahavitako ny fianarako tao amin'ny lisea tamin'ny 1976. Vao avy naka izany aho ary mandalo ny fomba tsara indrindra. Nanana fanontaniana momba ny fametahana valizy fanamarinana iray miaraka amin'ny satroka fako aho. Ny protokolola dia tsy nanondro na tsia ny fanoloana ny mekanika valizy fanamarinana rehefa avy nametraka seranana iray.
Fanontaniana iray hafa momba ny fahalalana: ny rafitra tany am-boalohany dia niteraka tsindry avy amin'ny fantsona solika. Ankehitriny dia mametraka paompy misy solika voatondro ho paompy 'vacuum pulse' aho. Saingy toa omeko azy ny tsindry amin'ny pulse fa tsy pozabe. Ka manana fifandraisana ara-tsaina amin'izany aho. Miahiahy aho fa olana nomenclature io. Fa mba ampianaro aho.
Efa nahavita ny fanadiovana karibonetra aho, manao ny fanavaozana ny fitoeran-tsolika, ary mbola mila manao ny fanamafisam-peo sy ny impeller, alohan'ny fialantsasatra aogositra. Nandefa andriamanitra ny protokolonao sy ny sarinao. Ho mariky ny fankasitrahana kely ary ho an'ny fahafahako miditra dia te-handray anjara indray mandeha amin'ny fikojakojana ity tranokala ity aho. Ahoana no anaovako an'izany?
napetraky JD4801 tamin'ny Sat, 07 / 11 / 2020 - 17: 38
Miasa amin'ny 1958HP tamin'ny 5.5 aho…
Miasa amin'ny seahorse 1958 5.5HP aho ary manana olana amin'ny fandaharam-potoana. Mandeha hisolo toerana sy kondensera. Nojereko ihany koa ny mpanara-dia an'i cam ary rehefa namadika ny kodiarana aho dia tsy nijanona teo amin'ny marika cam tamin'ny marika ambany. Amin'ny lalàm-panoanana avo dia tsy mihodina raha tsy amin'ny fisisihanao hoe aiza ianao no manantona ny fifehezana ny motera. Izay hevitra rehetra momba ny fanitsiana ny rameva. Azoko atao ny mihazakazaka nefa mihazakazaka izy ary zatra mijanona amin'ny fitaovam-pandehanana na amin'ny fanitsakitsahana ambany.
Ny fampandehanana dia tsara amin'ny moto amin'ny 90 psi amin'ny cylinders roa. Nanao karibon-tsarimihetsika teo amboniny aho ary nanadio sy nanolo ny ampahany rehetra azy ireo toy ny dingana efa vita eto. Nanampy tanany io.
napetraky thepugfather tamin'ny Sun, 04 / 04 / 2021 - 20: 18
Fanampiana amin'ny maodely #
Vao nividy sambo jon izay tonga niaraka tamin'ny motera Johnson Sea Horse 5.5. Rehefa mijery ny maodely # aho, ny hany zavatra hitako dia ny 10 hp.
Serial # lovia